DOWNLOAD SOFTWARE POWERDVD - MMEMME NYOCHA - 2019
Igwe mgbasa ozi dị elu bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka kọmputa ọ bụla. Taa, anyị ga elele anya nke otu n'ime vidiyo na egwu egwu egwu, PowerDVD.
Ike DVD bụ ngwakọta zuru ezu maka ịrụ ọrụ na DVD, Blu-ray na faịlụ mgbasa ozi ndị ọzọ. Ngwaahịa a bụ ọkpọ mgbasa ozi dị ike na njirimara na njirimara.
Ahịa Ọkọlọtọ Naanị
PowerDVD na-enye gị ohere ikpokọta faịlụ niile n'otu ebe iji hazie egwu, vidiyo na foto gị.
Na oge ọ bụla, kpọtụrụ ndị na-arụ ọrụ kọmputa gị ka ị na-agba ọsọ faịlụ achọrọ.
2D ka atọgharịrị atọ
Ọ bụrụ na KMPlayer na-enye gị ohere igwu egwu naanị na 3D ihe nkiri a na-eme nke mbụ maka nlele 3D (ya na stereo stereo ma ọ bụ vertical), mgbe ahụ, mmemme a nwere ike ịmepụta fim ọ bụla na 3D. Naanị ị chọrọ ịkwado na iko pụrụ iche na popcorn.
Mmetụta iji melite mma video
Ọ bụrụ na ọdịdị mbụ nke foto ahụ na ụda ahụ adaghị gị, gbanwee njedebe ọ bụla n'onwe gị na uto gị.
Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịgụnye na họrọ egwu na ndepụta okwu, yana, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, budata faịlụ na ndepụta okwu, ma ọ bụrụ na ọ dị na kọmputa ahụ iche.
Ihuenyo ese foto
Ịchọta ihe na-adọrọ mmasị na fim ahụ ịchọrọ ịchekwa na kọmputa gị? PowerDVD na-eme ka ọ dị mfe iji nbudata ihuenyo, na-echekwa foto ahụ zuru ezu na kọmputa gị ozugbo.
Ịgbakwunye ibe edokọbara
Iji laghachi na oge na-atọ ụtọ na fim ahụ, tinye ya na ibe edokọbara gị.
Otu n'ime akụkụ ndị dị ịrịba ama nke PowerDVD bụ mmekọrịta nke faịlụ mgbasa ozi na nchekwa CyberLink Cloud. Site na nchekwa nchekwa ígwé ojii a, ị nwere ike ijide n'aka na faịlụ mgbasa ozi gị agaghị efu, ọ ga-adịkwa n'oge ọ bụla na ngwaọrụ ọ bụla (kọmputa, TV ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka).
Dezie ihe dị ọkụ
N'adịghị, dịka ọmụmaatụ, site na Osisi Media Player, nke ị nwere ike ịmepụta mkpokọta isi ọkụ gị maka ịrụ ọrụ ọ bụla, PowerDVD na-enye ọtụtụ nhazi nke nhazi, na-enye gị ohere ikenye igodo dị ọkụ naanị maka ọrụ isi nke usoro ihe omume ahụ.
Gwuo ihe nkiri ahụ na kọmpụta gị ma kpọọ ya na TV. Njirimara a dị mgbe ngwaọrụ jikọtara na netwọk ahụ.
Usoro pụrụ iche nke usoro ihe omume ahụ nke na - enye gị ohere iji jikwaa faịlụ ndị mgbasa ozi na TV.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-arụ ọrụ na kọmputa ma na-ekiri ihe nkiri n'otu oge ahụ, ị ​​ga-enwe obi ụtọ maka ọrụ nke na-enye gị ohere idozi window windo mgbasa ozi n'elu windo niile.
Gbanwee n'usoro akụkụ
Ọ bụrụ na afọ ojuju gị na vidiyo, ị nwere ike ịhazi ya onwe gị site na iji otu n'ime nhọrọ ndị a tụrụ aro maka ịgbatị onyinyo ahụ.
Mepụta ndepụta ọkpụkpọ
Hụ nọmba egwu na-enweghị njedebe nke listi ọkpụkpọ dị iche iche na egwu ma ọ bụ ihe nkiri ma kpọọ ha n'oge ọ bụla.
1. Ọmarịcha interface enyi na njirimara;
2. Mmekọrịta na njikwa ntanetị;
3. Ọrụ, nke ga-ezuru ọtụtụ ndị ọrụ;
4. Enwere nkwado maka asụsụ Russian.
1. E nwere maka ego, ma enwere ikpe ikpe n'efu.
PowerDVD bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị kachasị mfe maka ijikwa na igwu faịlụ mgbasa ozi. Usoro ihe omume ahụ nwere interface dị elu ma na-eji ọrụ eme ihe, ngwaọrụ iji meziwanye ụdị faịlụ mgbasa ozi ndị e mepụtara, yana ọrụ nchịkwa nke na-enye gị ohere ịmere fim na TV, dịka ọmụmaatụ, site na smartphone gị. Kesaa maka ego, ma maka ohere ndị ahụ ma kwụọ ụgwọ.
Download ụdị ikpe nke Ike DVD
Cyberlink kamera Cyberlink Mediashow CyberLink PowerDirector EziTheater Enhancer
PowerDVD bụ ngwá ọrụ DVD dị ike nke na-enye ọdịda dị elu na playback vidiyo.
Onye Mmepụta: CyberLink Corp
Ọnụ: $ 28